သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လူတိုင်းလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း (၇)ချက် - Lifestyle Myanmar
Cheerful mixed race lady with SAVE OUR PLANET placard leading international group of demonstrators. Enthusiastic young people making strike on the street, fighting for saving environment
“လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကို မပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ကမ္ဘာကို ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးလူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင် Paul Shane Spear က ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ငယ်တုန်းက ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲချင်တယ်လို့ အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “လူတစ်ယောက်ထဲက ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး” လို့ သူ့ကိုပြောခဲ့ကြပါတယ်။ “ငါတစ်ယောက်ထဲ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့ ငါဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ “ ထင်ကောင်းထင်နေမိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကြီးကို ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်စေချင်တဲ့ အိမ်မက်ကတော့ လူတိုင်းနီးပါးမှာရှိနေမှာပါ။ အမေရိကန်စာရေးဆရာမ Helen Keller က “ငါကတစ်ယောက်ထဲပါပဲ ငါလုပ်ချင်တာအကုန်လုံးကိုမလုပ်နိုင်ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ ငါလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို မငြင်းဆန်လဲလုပ်သွားမှာပါ” လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ သာယာလှပတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာစေဖို့ လူသားတိုင်း ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
၁. လုပ်အားပေးသူ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပါဝင်ကူညီပါ
ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်အားပေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကူညီလုပ်အားပေးပါ။ လုပ်အားပေးတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေအကုန်လုံး လုပ်အားပေးတဲ့နေရာမှာ သုံးလိုက်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ်ဆန္နရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်လတစ်ခါဖြစ်ဖြစ် တစ်ပတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ် လုပ်အားပေးကူညီလို့ရပါတယ်။
၂. လူသားချင်းစာနာမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားပါ
လူတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး စာနာသောအားဖြင့် လေးစားမှုထားပေးပါ။ လူတန်းစားခွဲခြားဆက်ဆံတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်ပြီး လူတိုင်းကို တန်းတူညီမျှဆက်ဆံပေးပါ။
အကူအညီလိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ လိုအပ်တာလေးတွေကို ကိုယ်ရဲ့ လုပ်အား၊ ငွေအားနဲ့ ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ အလှူလုပ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်တော့ – ယခုတိုင်းပြည်ရေးအခြေအနေကြောင့် တစ်နေ့လုံး ပြည်သူတွေ လမ်းမပေါ်မှာ ဆန္နပြနေကြရတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ကိုယ်က တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ရေသန့်ဘူး၊ စားစရာတွေအပြင် လိုအပ်တာလေးတွေကို လှူဒါန်းပါ။ ကူညီပါ။
၄. ကြင်နာမှုတွေကို မျှဝေပါ
လူတွေကို ပျော်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အခွင့်ရေးရှိခဲ့ရင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတိုင်းဟာ အများမသိအောင် ကြိုးစားအားတင်းပြီးရုန်းကန်နေရတာပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကြင်နာမှုလေးက သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာကို အဆင်ပြေသွားစေတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ကြင်နာမှုလေးတွေကို မျှဝေပေးပါ။
၅. မဝတ်တော့တဲ့ အဝတ်အစားများလှူဒါန်းပါ
ကိုယ်နဲ့မတော်တော့လို့၊ ကိုယ်မဝတ်ချင်တော့လို့၊ ဟောင်းနေလို့စတဲ့ ကိုယ်မဝတ်တော့တဲ့ အဝတ်တွေကို မလွင့်ပစ်ဘဲ လှူဒါန်းပါ။ ဒီလိုလှူဒါန်းရာမှာလည်း အိမ်ခြေရာမဲ့သူတွေ၊ လမ်းလေးမှာ အဝတ်စလစ်ကလေးလေးတွေ၊ အဝတ်အစားဝယ်မဝတ်နိုင်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်တိုင်လှူဒါန်းလို့ရသလို ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်။
“အသက်သည် သွေး၊ သွေးသည်အသက်” ပါ။ ကိုယ်တစ်နာရီစာလောက် သွေးလှူခဲ့ခြင်းက အရေးပေါ်သွေးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေ၊ အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျေနပ်အားရတဲ့ပီတိမျိုးက ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး။
၇. Sharing is caring ပါ
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်စေ ပါဝင်ကူညီချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်အားပေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းအားလုံးသိအောင် Sharing လေးလုပ်ပေးပါ။ ဒါ့အပြင် Facebook, You Tube, Twitter, Instagram စတဲ့ Social Media ကနေလည်း Sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပေးပါ။
Source – gaiam, tinybuddha